Omume Kachasị Mma 6 I Kwesịrị Iso Mgbe Buildingmepe peeji Wepu aha | Martech Zone
Omume Kachasị Mma 6 I Kwesịrị Iso Mgbe Iwulite Peeji Na-adịghị wepu aha
Wednesday, December 6, 2017 Sunday, December 10, 2017 Douglas Karr
Anyị na-akọrọ ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na ihe mere ndị mmadụ ji wepu aha site na ozi ịntanetị ahịa gị ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ. Offọdụ n'ime ya nwere ike ọbụghị gị kpatara ya, ebe ndị debanyere aha na-ejupụta na ọtụtụ ozi ịntanetị na ha chọrọ naanị enyemaka. Mgbe onye debanyere aha chọtara wee pịa na njikọ wepu aha na email gị, gịnị ka ị na-eme iji gbalịa ịchekwaa ha?
Emechara m na nke ahụ Sweetwater, ihe akụrụngwa akụrụngwa ebe ahụ dị egwu iji rụọ ọrụ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ dị m ka ọ dị njọ ịpị njikọ njikọ ahụ, mana anaghị m azụta ugboro ugboro na azụmahịa email na-abata ụbọchị ole na ole. Mgbe m pịrị njikọ njikọ ahụ, lee ihe a kpọtara m:
Kedu ka nke ahụ si dị mma? Kama ịwepụ aha na ihe niile, naanị m belata ya otu ugboro n'ọnwa.
Ọ bụrụ na m na-akara ibe a, aga m enye ya A +! Ọ bụghị naanị na ha na-enye nhọrọ maka ugboro ole, ha ka na-arụ nnukwu ọrụ nke ime ka m mara ihe m nwere ike ịlafu yana ịtọ anya atụmanya na nke ọ bụla. Nke a dị na Epsilon infographic wepụtara, Na-agagharị na igbe mbata wepu aha, na-achọpụta omume 6 kachasị mma na onye zitere ozi email ọ bụla kwesịrị ịgbaso mgbe ị na-eme ndị na-edeghị aha:
Nkwurịta Okwu Nhọrọ - kwụsị na “ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla” wepu aha na peeji nke ma nye ụzọ dị nfe nke na-enye ọkwa dị iche iche nke itinye aka.
Otu-Pịa Wepu aha - emela ka o sie ike wepu aha ya. Ihe ikpeazụ ị ga-eche n’obi nke nyere gị ohere ịgwa ha okwu bụ ka ị kpasuo ha iwe site n’ekweghị ka ha laa.
Kpochapụ wepu aha na - obere font-size, na-ezo n'azụ logins, verifying adreesị email… kwụsịrị ime ka o sie ike ịchọta na wepu aha. Ọ bụrụ na ndị mmadụ chọrọ ịpụ, hapụ ha.
Kpochapụ ndị debanyere aha - Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchebe igbe nnabata dị mma yana usoro njikọta siri ike, kpochapụ ndepụta nke ndị debanyere aha gị na-etinyebeghị ihe karịrị otu afọ (ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ị bụ oge).
Ikpeazụ Chance - tupu i kpochaa ndị debanyere aha ha n’achọghị, mee ha ohere ikpeazụ iji hụ ma ha ga-achọ ịnọ.
Nweta nzaghachi - dị ka ihe atụ dị n'elu, anaghị m ahapụ Sweetwater… Achọghị m ka ozi ịntanetị ha ugboro ugboro. Ejila ya n'onwe gị mgbe onye debanyere aha hapụrụ. Igbe mbata nke taa jupụtara na njiko ma sie ike jikwaa, ndị ahịa gị nwere ike chọọ ịchọ idobe ihe ọfụma. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata ihe kpatara eji ahapụ, jụọ ha na peeji ị na - wepu aha.
Na-agagharị na Igbe mbata: Wepu aha
Tags: email ugboroepsilonugborondepụta hichapụkpochapụ ndị debanyere ahaihe kpatara nke wepu ahammiri di utowepu ahawepu aha na ibe
Ihe kpatara ụlọ ọrụ gị kwesịrị iji mejuputa mkparịta ụka ndụ